Oovimba bezimvo-Funda ukuRhweba
I-Bitcoin ingena kwimimandla ephantsi yozinzo ukusukela phakathi kwe-2018 -Iimetrikhi zityhilwa yi-SKEW
Ukuthengisa ii-cryptocurrensets kunokuba yinto ekruqulayo ngamanye amaxesha, ngakumbi xa amanani okuthengisa esiba sezantsi kakhulu. Uninzi lwexesha, ukunqongophala komdla kurhwebo kubangelwa kukungazinzisi kwamaxabiso anokubeka indawo yentengiso nokuba kukuxinana okanye indlela yokudibanisa.
Kutshanje, urhwebo lweBitcoin luye lwafumana ubunzima obuninzi kwicala eliphantsi, ngakumbi kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ezinciphisileyo ezazise ixabiso kwizantsi leedola elingama- $ 7100 ngeveki. I-Bitcoin ikwazile ukubuyisa indawo yexabiso ekhankanyiweyo emva kotshintsho lweeyure ezingama-24 zokugqibela kwixabiso, kodwa ukumelana komdibaniso kwi-7300 yeedola kuthintele ukonyuka okuthe kratya. Okwangoku, iBitcoin idada kwi- $ 7200 xa ithelekiswa nedola yaseMelika.
Ukubuyela ku-Epreli 2 ukunyuka kokungazinzi okuye kwahlanganisa ixabiso le-BTC ukusuka kwi-4400 yeedola ukuya kuthi ga kwi-13770 yeedola ngoJuni ngaphambi kokungena kwi-6500 yeedola ngo-Novemba 25. Eli xesha lokungaziphathi kakuhle libhale elona xesha libalulekileyo kwimbali yeBitcoin.
Ukuthetha ngokunyuka ngequbuliso kwe-25 ka-Okthobha, kukhuthazwe sisibhengezo sikarhulumente waseTshayina kwi-cryptocurrency kunye ne-blockchain technology yokwamkelwa kwinkqubo yayo yezemali. Iziphumo zeendaba zivumela i-cryptocurrency yokuqala ukuba irekhode eyona miqulu iphakamileyo yemihla ngemihla ukuza kuthi ga ngoku, isukela kwi-7300 ukuya kwi-10370 yeedola ngaphakathi kweentsuku ezintathu-iphawula usuku lwembali lweBitcoin.
I-Bitcoin ngoku ijongene nokuchasana okuninzi kwimimandla engama- $ 7300- $ 7400 okoko ixabiso lisandula ukubuyela kwakhona kwi-7000 yeedola. Okwangoku, ukungazinzi kwezorhwebo kuye kwabuthathaka ngokumangalisayo kwicala lenkunzi. Itwitter yakutshanje evela kwi-SKEW ibonisa ukuba ukungazinzi kweBitcoin kukwicala eliphantsi ukusukela phakathi ku-2018. Ngaphezu koko, itshathi ityhila iimetrikhi zeentsuku ezilandelelanayo ngeBitcoin ezihamba ngaphantsi kwe-5%:
I-Bitcoin ingene kulawulo olungelulo olusebenzayo ukusukela phakathi ku-2018 pic.twitter.com/OIBDFDqG6V
- skew (@skewdotcom) Disemba 13, 2019
Ukuhlalutya le tshathi ingentla, ixabiso leBitcoin kunokwenzeka ukuba lenyuke kakhulu kwiinyanga ezizayo njengoko eli xesha linokuba lelinye ithuba kubarhwebi nakubatyali mali ukuba bagxume ngaphezulu iingqekembe okanye amaqhekeza enzuzo yexesha elizayo.
Ngokoluvo lwam, ukuba iBitcoin ibonisa ubuthathaka ngeli xesha, ixabiso lingalahla kwi- $ 5000 enokuthi isebenze njengenkxaso ephambili ku-Epreli 2 indawo yokuphumla kwitshathi yeveki ngaphambi kokunyuka. Kodwa ukuba i-7000 yeedola ingabamba kakuhle, kuya kufuneka sibona ulungiso olukhulu luye kuthi ga kwi-8400 yeedola ngaphakathi kwithuba elifutshane. Sifanele ukulindela enye yezi ntshukumo kungekudala.
tags Iimali ze-Crypto, Umbono
Ukuhlaziywa: 30 Novemba 2019